Daawo Sawiradda: Booqashadii John Kerry Ee Muqdisho. – SBC
Daawo Sawiradda: Booqashadii John Kerry Ee Muqdisho.
Posted by SBC Editor on May 5, 2015 Comments
Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka John Kerry, oo booqasho rasmi ah oo maalin ah ku yimid Soomaaliya.
Madaxweynaha oo uu wehliyo Ra’iisul Wasaare, Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, ayaa Mudane Kerry uga warbixiyey xaaladda dalka ee dhinacyada siyaasadda, amniga, Hiigsiga 2016, dhismaha iyo isku dhafka ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo kuwo kale.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka Mr Kerry ayaa soo dhoweeyay horumarka dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada iyo barnaamijyada Hiigsiga 2016 ee Soomaaliya, isaga oo ku dhiirrigeliyey hoggaamiyeyaasha Soomaaliya in ay sii dardar geliyaan dadaalkooda ku aaddan dhib u dhiska dalka.
Mr Kerry ayaa sheegay in Mareykanku uu billaabayo hannaan uu rasmi ahaan Muqdisho uga furanayo safaarad si rasmi ah u shaqeysa, Soomaaliyana laga taageeri doono dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo kaabeyaasha kale ee ay u baahan tahay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka John Kerry waxaa sidoo kale si wadajir ah ula kulmey madaxda dowlad goboleedyada Puntland, Jubba iyo Koonfuur Galbeed Soomaaliya.
Wafdiga Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Mareykanka waxaa kale oo uu la kulmey xubno ka socda ururrada bulshada, ka hor intii aanuu ka ambabixin magaalada Muqdisho.